Umjelo wezixhobo zokusila
San Damiano, Emilia-Romagna, Italy
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLucia E Lelio
Indawo yam yokuhlala ikufutshane neepaki kunye nobugcisa kunye nenkcubeko. Ungathanda indawo yam yokuhlala ngenxa yezi zizathu: ukusondelana kunye nendawo. Indawo yam yokuhlala ilungele izibini, abahambi bodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana) kunye namaqela amakhulu.
Indawo egqwesileyo apho unokuchitha khona indawo yokuhlala ezolileyo, kunye neentsuku ezimangalisayo eziphawulwa yimozulu yasemaphandleni, ngenxa yokusondela komlambo "Nure", kodwa kwangaxeshanye isixeko sifikeleleka ngokulula kwimizuzu eyi-10/15 ngemoto.
Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela ngokucacileyo kwigumbi elizabelwe zona, indawo yokuhlala apho zinokuhlala khona kwaye zinxibelelane nezinye iindwendwe okanye zisebenzise inkonzo ye-wi-fi, kwaye ekugqibeleni intendelezo yendawo yokuhlala apho banokonwabela ukutshona kwelanga okuqaqambileyo.
4.67 ·Izimvo eziyi-27
4.67 · Izimvo eziyi-27
Umgama omfutshane uhamba umjelo othi "Nure", apho unokuphumla, uphole. Apho le mibono yenzeka khona, kwabakho nomthombo owathi ngoko nangoko waba ngummangaliso. Amanzi aseSan Damiano asebenza ikakhulu kwi-cerebral cortex - edlala indima ephambili kwiindlela ezintsonkothileyo zengqondo ezifana nenkumbulo, ingcamango, ingqondo, njl njl - ukulungelelanisa imisebenzi yayo.
Ngamanzi anika ulwazi kunye nethemba, ukuphembelela ngokufanelekileyo iingcinga kunye nezenzo.
Ukuzola kunye nokuzola, kuyasikhulula kwiimeko zokuxhalaba, uvalo kunye nokucaphuka. Lungiselela ukulala kwaye ukhulule iintlungu.
Umbuki zindwendwe ngu- Lucia E Lelio
Abalawuli baya kubakho ngexesha lendawo yokuhlala kwaye balungele ukwanelisa (ukuba kunokwenzeka) iimfuno kunye nezicelo zomthengi.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: Emva ko 09:00